🥇 ▷ The iPhone 6 Plus wuxuu kobciyaa suuqa wajiga ✅
The iPhone 6 Plus wuxuu kobciyaa suuqa wajiga
iPhone 6 Plus wuxuu matalaa 44% suuqyada wajiga
Nooca cusub ee loo yaqaan ‘iPhone 6 Plus’, oo ah shaashadda weyn ee taleefannada casriga ah ee laga soo qaatay Apple, iPhone 6, wuxuu ka caawiyay suuqa sicirbararka inuu jajabiyay iibkiisa sedexdii bilood ee ugu horreeyay sannadka 2015 iibinta 44% wadarta.
Baahida loo qabo aaladaha waaweyn ee muujinta ayaa sii kordha
Macluumaadka ayaa ka yimid shirkadda Kantar shir caalami ah oo ku saabsan isgaarsiinta iyo teknolojiyada halkaas oo la tusay in suuqa wajiga uu koray 21% intii lagu jiray rubuc-billowgii ugu horreeyay ee 2015 iyo jiritaanka nooca loo yaqaan ‘iPhone 6 Plus’, wejiga koowaad ee Apple, wuxuu ka mid ahaa makiinadaha waaweyn ee kordhinta iibka.
In kasta oo Apple He uu hayo 44% boqolkiiba iibka qaybta wejiyada, mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee lagu xusho wejiga, labadaba macruufka iyo Android, wuxuu ahaa cabirka shaashadda. Sida muuqata adeegsadayaashu runti waxay ku raaxeystaan ​​awooda ay ku daawadaan farriimahooda iyo waxyaabaha kale ee ku duuban warbaahinta si toos ah shaashadaha ka badan 5 inji
Kantar wuxuu sidoo kale soo bandhigay xog kale, sida boqolleyda isticmaaleyaasha ka soo degay Android ilaa macruufka (11.4% marka loo barbar dhigo 14.6% sanadkii 2014). Iibka taleefannada casriga ah ee Apple, iPhone, waxay ku lahaan jireen AT&T, Verizon iyo howl wadeenada Sprint, halka Samsung ay ka talin jirtay iibka T-Mobile.
Sida muuqata xaqiiqada Apple Waxay ku fiicantahay suuqa Mareykanka iyo sidoo kale Shiinaha, joogitaan xoogan ayaa ka socda magaalooyinka magaalooyinka Shiinaha halkaas oo dad aad u tiro badani ay u soo jeedsadaan inay iibsadaan alaabada Apple tan iyo xaqiiqada fasalada dhexe si aad ah ayey u soo hagaageysay.
IPhone wuxuu ka adkaadaa caqabadaha wuxuuna maamulaa si loo kordhiyo iibka Apple
44% suuqa wajiga ee Mareykanka oo iska leh iPhone 6 Plus waxay ka caawisay shirkadda Cupertino inay hesho jihada cusub Marka laga hadlayo aaladooda tan iyo intii jawaabta ay ahayd mid aad u qanacsan, in kasta oo dhaleeceyntii ugu horreysay ee salka u saartay qiimaha bilowga ay aad uga sareyso kuwa kale ee heerka sare ee shirkadda.
Waxay umuuqataa taasi iPhone wuxuu mar labaad ku guuleystey inuu ka guuleysto nacaybka isla markaana u dhigo laftiisa mid ka mid ah aaladaha lacagta lagu dalbado, cabirka shaashadda iyo awooddiisu waa labada astaamood ee ugu waaweyn ee ay adeegsadayaashu muujinayaan. Iyada oo 44% wadarta guud ee iibka wejiyada ay leedahay shirkadda Apple, tirooyinka ayaa ah mid aad ugu qanacsan qorshaha iibka ee sannadka 2015, oo runtii ku jiri doona noocyo cusub oo casri ah oo leh shaashad weyn.